Ny sazy ara-panjakana ao amin’ny italiana ny rafitra ara-dalàna, dia ny sazy voalazan ny lalàna noho ny fandikana ny lalàna mahazatra izay mandrafitra ny fitantanana fandikàn-dalàna. Avy amin’ny didy amam-pitsipika fomba fijery, iray amin’ireo tena manan-danja fenitra dia lalàna n. efatra amby roapolo novambra taona, no. Tamin’ny hoe, izay nametraka voalohany ao amin’ny rafitra ara-dalàna nanao ny raharaham-panjakana fandikàn-dalàna, vokatry ny decriminalisation maro ny fandikan-dalàna, voasazy, mandra-dia, ny sazy ara-bola. Ny sazy ara-panjakana dia matetika pecuniary, fa dia, nandidy ny fandoavam-bola ny amin’ny vola. Ny pecuniary-panjakana sazy envisaged amin’ny zava-kanto.
Tamin’ny hoe, mety ho roa karazana: Ny ohatry eo amin’ny fidiram-bola sy ny sazy dia ho nampidirina tamin’ny taona ho an’ny fandikan-dalàna ao amin’ny fehezan-dalàna momba ny tena manokana raha tsy amin’ny antony ny hoe sata ara-toekarena. Ny lalàna koa dia milaza izany afa-tsy amin’ny toe-javatra voafetra mazava napetraky ny lalàna, ny vola indrindra ny pecuniary sazy ara-panjakana dia mety, ho an’ny tsirairay ny fanitsakitsahana, ny handresy ny im-polo kely indrindra. Amin’ny ankapobeny ny fampiharana ny pecuniary sazy ara-panjakana ny lalàna mamela ny fandoavana ny vola ho tena kely hatraiza. Izany dia mitovy amin’ny ampahany fahatelo amin ilay ambony indrindra ny sazy omena noho ny fanitsakitsahana na, raha kokoa ny mahomby, ny avo roa heny ny kely indrindra ny sazy edittale, ankoatra ny vola lany amin’ny fitsarana. Ny fandoavam-bola dia tsy maintsy atao ao anatin’ny fe-potoam-ny enimpolo andro manomboka ny daty avy hatrany na ny fampahafantarana amin’ny antsipirihany ireo fanitsakitsahana. Ao ny raharaha ny tsy fandoavana ny vola, dia manao ny injunctive order amin’ny fitaizana ny sazy. Misy ireo maningana, ohatra, ny italiana highway code manome noho ny fandoavam-bola amin’ny nampihena ny fepetra, dia ny kely indrindra ho faty edittale ny tsy fandoavam-bola ao anatin’ny fotoana enim-polo andro, dia, ao amin’ny mandeha ho azy isam-ponina ny sazy ho amin’ny avo roa heny ny kely indrindra, raha ny tatitry ny fifandirana efa heverina ho mpanatanteraka ny anaram-boninahitra ho an’ny fanangonana ny vola raha tsy misy ny ilaina ho an’ny ny injunctive baiko nomen’ny art. valo ambin’ny folo ny lalàna tamin’ny hoe. Ny fandoavam-bola ao anatin’ny dimy andro avy ny daty ny tatitry ny fanombanana ny vokatra ao amin’ny fampihenana ny telo-polo ny vola (ankoatra ny sasany ny fandikan-dalàna).
Iraika ambin’ny folo lahy ny manao zavatra tsy misy. Tamin’ny hoe, izay manome amin’ny famaritana ny pecuniary sazy ara-panjakana napetraky ny lalàna eo amin’ny fetra ambany indrindra sy ny ambony indrindra ny fetra sy ny fampiharana ny sazy fanampin-javatra tsy voatery, tsy maintsy manana ny momba ny fepetra isan-karazany: Ny zava-dehibe indrindra eo ny fahombiazan’ny ny sazy, ary ny mety hisian’ny fanarenana ny bola tsy maintsy atao mikasika ny raharaham-panjakana ho faty any ny fanajana ny tsy mponina ao amin’ny Firenena (izany hoe ireo mpizaha-tany, tsy olom-pirenena italiana sy izay tsy nangataka fahazoan-dalana hijanona). Amin’ny fiteny mahazatra, rehefa miresaka (amin’ny fomba ara-teknika) ny ao ‘tsara’ na ‘fa izany tsy’, azy raha ny marina dia milaza ny sazy ara-panjakana, matetika noho ny fandikàn-dalàna nanome ho amin’ny Fehezan-dalàna momba ny lalana, na noho ny rehefa nampiasa ny fitateram-bahoaka tsy misy na amin’ny anaram-boninahitra ny travel tsy mendrika. Ao amin’ny lalàna momba ny heloka bevava ny tsara dia karazana sazy nampiharina nandritra ny heloka bevava raha ny fa izany tsy dia fandikàn-dalàna ny marimarina kokoa, noho ny heloka bevava ny sazy ireo an-tranomaizina sy onitra, raha ny fa izany tsy mba manana ny fisamborana sy ny tsara
Fanelanelanana sy ny didy - Mpanelanelana amin'ny Italia